မွဝတီ - ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းရှိ သစ်ပုပ်ပင်ကို မြို့ပြအမွေအနှစ်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အပြာရောင် ကမ္ပည်းပြား တပ်ဆင်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းရှိ သစ်ပုပ်ပင်ကို မြို့ပြအမွေအနှစ်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အပြာရောင် ကမ္ပည်းပြား တပ်ဆင်
Saturday, 07 September 2019 11:16	font size decrease font size increase font size
ရန်ကုန်မြို့၏ (၃၂) ခုမြောက် မြို့ပြ အမွေအနှစ်အထိမ်းအမှတ် အပြာရောင် ကမ္ပည်းပြားကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်း အတွင်းရှိ သစ်ပုပ်ပင်၌ စက်တင်ဘာ ၆ ရက် က တပ်ဆင်ကြောင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာဖိုးကောင်း၏ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ ''ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ရာပြည့်အကြို အဖြစ် သစ်ပုပ်ပင်မှာ မြို့ပြအမွေအနှစ် အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြား တပ်ဆင်တဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ အမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများစွာရှိတဲ့အတွက် ဆက် လက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ဆောင် ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ဒေါက်တာ ဖိုးကောင်းကပြောသည်။
အဆိုပါသစ်ပုပ်ပင်သည် သက်တမ်းရင့် ရွက်ကြွေပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်ပြီး ရုက္ခ ဗေဒအမည်မှာTetrameles nudiflora. R.Br ( Datiscaceae ) ဖြစ်ကာ ရန်ကုန်မြို့၏ အထင်ရှားဆုံးသစ်ပုပ်ပင်ဖြစ်သည်။
''မြို့ပြအမွေအနှစ်တွေ ကာကွယ်ထိန်း သိမ်းရာမှာ အဆောက်အအုံတွေသာမက ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ သဘာဝ အမွေအနှစ်တွေကလည်း အရေးကြီးပါ တယ်။ သစ်ပုပ်ပင်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပရဝဏ်ရဲ့ သင်္ကေတသဖွယ် စတည် ကတည်းက တွဲလျက်ရှိတဲ့အတွက် တန်းတူ တန်ဖိုးထားရမယ့် အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်'' ဟု ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် ထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မိုးမိုးလွင်ကပြောသည်။
သစ်ပုပ်ပင်၏သက်တမ်းကို အတိအကျ ခန့်မှန်းရန်ခက်သော်လည်း ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ် က အစပြုခဲ့သည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ထက် ပိုမိုသက်တမ်းရင့်ကြောင်း မှတ်တမ်း များအရ သိရသည်။
သစ်ပုပ်ပင်၌တပ်ဆင်ခဲ့သည့် အပြာ ရောင်ကမ္ပည်းပြား၏ သုတေသနနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို Myanmar Marketing Research and Development Co.,Ltd. မှ ကျခံ ထည့်ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ပည်းပြားတပ်ဆင် ရာတွင် အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှုရှိစေရေးအတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှူးများက ကူညီပေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။